Kaardinaal Joorji Peel murtee miidhaa saalaa raawwatan jedhu irratti darbeef ol-iyyatan kufe - BBC News Afaan Oromoo
Kaardinaal Joorji Peel murtee miidhaa saalaa raawwatan jedhu irratti darbeef ol-iyyatan kufe
Kaardinaal Peel hanga 2022tti mana hidhaa keessa turuu isaaniiti.
Kaardinaal Joorji Peel barsiisota amanataa Kaatolikii beekamoo keessaa tokko kan tahan murtee yakka miidhaa saalaa raawwataniiru jedhamuun irratti darbe irratti ol-iyyata fudhatanii fudhatama hin arganne.
Kaardinaalichi ol-iyyata isaanii Awustiraaliyaatti ture kan dhiyeeffatan.
Bara 1990 keessa Awustiraaliyaa Kaatediraalii Meelborni keessatti ijoollee dhiiraa lama irratti yakka miidhaa saalaa raawwataniiru jedhamuun himatamanii ture.
Kaatediraalichi balleessaan hojjedhe hin qabu jedhanii haa waakkataniyyuu malee ji'a Bitootessaa darbe hidhaa waggaa jahaan akka adabaman irratti murtaa'ee mana hidhaa galaniiru.
Murtoon narratti darbe haqa qabeessa miti jechuun Kaardinaalichi manni murtiitti ol- iyyata isaa fudhatanis manni murtii jalaa kuffiiseera.
Phaaphaasin Kaatolikii luboonni gaaltama garboota saal-qunnamtii gochuu amanan
Manguddoon ganna 78 kun kana booda mana murtii ijibbaataa isa xumuraa biyyattitti ol-iyyatu jedhamee eegama.
Ji'a Muddee keessa ture waldaa Kaatediraalii Paatirik jedhamu Awustiraaliyaa Meelboorni jiru keessatti ijoollee dhiiraa umuriin isaanii waggaa 13 tahan irratti miidhaa saalaa qaqqabsiiseera jedhamuun himanni kan irratti dhiyaate.
Ragaa guutuu malee shakkiidhumaan natti murtaa'e jedhanis ol=iyyanni isaanii abbootii seeraa sadii keessaa sagalee 2-1'n jalaa akka kufu tahe.
Himanni kaardinaalicha irratti dhiyaate kun waldaa Kaatolikiiakka malee rifachiiseera. Paapaasii ol-aanaafis gorsaa dhiyoo tahanii tajaajilaa turaniiru.
Himatichi maal jedha?
Kaardinaal Joorji Peel bara 1996 yeroo luba ol-aanaa waldaa Kaatolikii Meelboorni Paatirik tahuun tajaajilaa turan ijoollee dhiiraa lama irratti miidhaa saalaa raawwataniiru jedhamuun himataman.
Dhaddachis miidhamaa lubbuun jiru irraa waanta irratti raawwate dhaggeeffateera. Miidhamaan inni tokko ammoo qoricha sammuu hadoochu akka malee fudhachuun bara 2014 lubbuun isaa darbite.
Manni murtiis waan miidhamaan dubbachaa jiru kun seenaa dhugaa keessa darbedha malee fakkeessee miti jechuun ol iyyata isaanii osoo hin fudhatiin hafe.
Kaardinaalichi ijoollee dhiiraa irratti qunnamtii saalaa raawwate jedhamuun kan himataman yoo tahu himanni biraa irratti dhiyaate afur ammoo gochaa haamilee daa'imaa miidhu raawwate jedhamuun kanneen banamanidha.
Kaardinaal Peel yeroo konkolaataan gara mana hidhaatti geeffaman.
Miidhamaan dhaddacha irrattidhiyaatee waa'e miidhaa irra gahaa ture dubbate murtoo seeraa namni hundi itti abdatu jechuun murtoo kaardinaalicha irratti darbeef gammaduu isaa dubbate.
Imallikoo salphaa hin turre. Dhimmichis nama maqaa guddaa qabuun waan raawwateef baay'ee dhiphisaa ture jechuun abukkaattoon isaa dubbate.
Ministirri Muummee Awustiraaliyaa '' miidhamtoota tutuqaa saalaaf jajabinan hawwa,yaadni koo guyyaa hundumaa isaan waliin jira'' jedhan.
Kaardinaalicha irraa aboon lubummaa kan irraa kaafamu tahas jedhama.
Konfirensii Luboota Kaatolikii Awustiraaliyaatti gaggeeffame irrattis manni amantichaa murtoo darbetti akka amanan himanii miidhaa saalaa ijoollee irra gahu hanbisuuf hojjechuu qabnas jedhan.
18 Ebla 2019
Biil Koosbii fi Roomaan Polaaniskii Oskaar akkaadaamii keessa ari'aman
4 Caamsaa 2018
"Dubartiin miidhaa saalaa irra gahu keessaa bahuuf waggaa 10 itti fudhata"
28 Caamsaa 2019
Phaaphaasin Kaatolikii Firaansis luboonni gaaltamoota garboota saal -quunnamtii gochuu amanan